Liverpool oo guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Everton kulankii xiisaha badnaa ee Merseyside derby+ SAWIRO – Gool FM
Dajiye December 1, 2021
(Liverpool) 01 Dis 2021. Kooxda Liverpool ayaa guul raaxo leh kaga soo gaartay naadiga Everton garoonka Goodison Park kulankii xiisaha badnaa ee Merseyside derby, kaddib markii ay ku adkaadeen 1-4, xilli ciyaartan ayaa qeyb ka ahayd kulammada `14-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee citaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Liverpool.
Daqiiqadii 9-aaad Liverpool ayaa durba hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Jordan Henderson kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis Robertson.
19 daqiiqo marka ay dheesha mareysayna kooxda Lierpool ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana 0-2 ka dhigay weeraryahankooda Mohamed Salah.
Laakiin daqiiqadii 38-aad kooxda Everton ayaa la timid gool, waxaana 1-2 ka dhigay dheesha Demarai Gray kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Richarlison.
64 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Mohamed Salah ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 1-3 ay ku hoggaamineysay kooxda Liverpool.
Balse Diogo Jota oo caawin ka helay Robertson ayaa daqiiadii 79-aad wuxuu hoggaanka u dheereeyay kooxdiisa Liverpool, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-4 ay ku hor kaceysay Reds.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-4 ay kaga soo adkaatay Liverpool kooxda Everton oo ay ku booqatay garoonka Goodison Park kulankii xiisaha badnaa ee Merseyside derby, Reds ayaa kaddib guushan ay gaartay waxay ka dhigan tahay inay wali fadhiso booska saddexaad ee dhanka kala sareynta horyaalka waxayna leedahay 32 dhibcood.
Horudhac: Manchester United vs Arsenal... (Ka bogo rikoorrada la yaabka leh ee caawa la arki karo & Xaaladda xiddigaha labada naadi)